Mozis na Osisi nke Na-enwu Ọkụ | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Bicol Bislama Boulou British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Osisi nke Ọkụ Na-enwu Na Ya
Mozis biri n’obodo Midian afọ iri anọ. Ọ lụrụ nwaanyị, mụọkwa ụmụ. Otu ụbọchị ọ nọ na-elekọta atụrụ ya n’ebe dị nso n’Ugwu Saịnaị, ọ hụrụ ihe dị egwu. Ọkụ nọ na-enwu n’osisi ogwu ma o reghị osisi ogwu ahụ. Mgbe Mozis gara nso ka ọ mara ihe na-emenụ, olu si n’etiti osisi ogwu ahụ kpọọ ya òkù, sị: ‘Mozis! Abịala nso ebe a. Yipụ akpụkpọ ụkwụ gị n’ihi na ebe ahụ i guzo bụ ala nsọ.’ Ọ bụ Jehova si n’ọnụ otu mmụọ ozi ya na-agwa Mozis okwu.
Ụjọ tụwara Mozis, ya ekpuchie ihu ya. Olu ahụ gwara ya, sị: ‘Ahụla m ahụhụ ụmụ Izrel na-ata. M ga-anapụta ha n’aka ndị Ijipt ma kpọba ha n’ala mara mma. Ọ bụ gị ga-esi n’ala Ijipt duru ndị m pụọ.’ Ì chere na ihe a ejughị Mozis anya?
Mozis kwuru, sị: ‘Olee ihe m ga-agwa ndị Izrel ma ha jụọ m onye zitere m?’ Chineke gwara Mozis, sị: ‘Gwa ha na Chineke nke Ebreham, Chineke nke Aịzik, na Chineke nke Jekọb zitere gị.’ Mozis gwaziri Jehova, sị: ‘Ọ bụrụkwanụ na ha egeghị m ntị?’ Jehova gwara Mozis ihe ọ ga-eme ka ha mata na ọ bụ yanwa zitere ya. Jehova gwara ya ka ọ tụpụ mkpara ya n’ala. Mgbe ọ tụpụrụ ya n’ala, ọ ghọrọ agwọ. Mgbe Mozis jidere agwọ ahụ n’ọdụ, ya aghọọ mkpara ọzọ. Jehova sịrị ya: ‘I mee ihe a, ha ga-amata na ọ bụ m zitere gị.’
Mozis kwuru, sị: ‘Amaghị m okwu ekwu.’ Jehova gwara ya, sị: ‘M ga-agwa gị ihe ị ga-ekwu, m ga-ezitekwara gị nwanne gị Erọn ka o nyere gị aka.’ Ihe ndị a Jehova gwara Mozis mere ka ọ ghọta na ọ nọnyeere ya. Ọ kpọọrọ ụmụ ya na nwunye ya laghachi Ijipt.
“Unu echegbula onwe unu banyere otú unu ga-esi ekwu okwu ma ọ bụ ihe unu ga-ekwu; n’ihi na a ga-enye unu ihe unu ga-ekwu n’oge awa ahụ.”​—Matiu 10:19
Ajụjụ: Olee ihe Mozis hụrụ mgbe ọ na-azụ atụrụ ya? Olee ihe Jehova chọrọ ka Mozis mee?
Ọpụpụ 3:1–4:20; Ọrụ Ndịozi 7:30-36
E Nyere Mozis Ọrụ Pụrụ Iche
Ò nwere mgbe ụfọdụ ọ na-adị gị ka ị gaghị emetali ihe a sị gị mee? Mụta otú i nwere ike isi rụọrọ Jehova ọrụ n’agbanyeghị na ị gaghị emetacha ihe niile.
Kaadị Akụkọ Fero
Fero eze Ijipt ò so ndị agha ya nwụọ n’Oké Osimiri Uhie?